Nwatakịrị a chụrụ n’ọgbakọ na ndị mụrụ ya bụ́ Ndịàmà Jehova hà nwere ike ịnọ ma a gaa ọmụmụ ihe? | Nke A Na-amụ Amụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ọ̀ dị mma ka nwatakịrị a chụrụ n’ọgbakọ na ndị mụrụ ya bụ́ Ndịàmà Jehova nọrọ ma a gaa ọmụmụ ihe?
Anyị ekwesịghị ịna-echegbu onwe anyị gbasara ebe onye a chụrụ n’ọgbakọ ga na-anọ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ụlọ Nche agwala ndị nne na nna ọtụtụ mgbe na ọ bụrụ na ha na nwa ha a chụrụ n’ọgbakọ ka bi, ha kwesịrị ịgba mbọ na-akụziri ya Okwu Chineke ma ọ bụrụ na ha chere na ha kwesịrị ime otú ahụ. A gwara ndị nne na nna n’Ụlọ Nche November 15, 1988, peeji nke 19 na nke 20 na ha nwere ike ịmụrụ nwa ha a chụrụ n’ọgbakọ Baịbụl ma ọ bụrụ na ha chere na ha kwesịrị inyere ya aka. Ọ ga-enyere nwa ahụ aka ịmụta ihe ga-enyere ya aka ịkwụsị àgwà ọjọọ ahụ e kwo chụọ ya n’ọgbakọ.
A gaa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, nwatakịrị a chụrụ n’ọgbakọ nwere ike ịnọ nwayọọ n’ebe nne na nna ya nọ. Ebe ọ bụ na ọ bụghị iwu na onye a chụrụ n’ọgbakọ ga na-anọ n’oche azụ, ọ bụghị ihe ọjọọ ma nwatakịrị a chụrụ n’ọgbakọ nọrọ n’ebe papa ya na mama ya nọ. Nne na nna nwa ahụ ga-achọ ka ọ na-ege ntị n’ọmụmụ ihe n’ihi na ha chọrọ ka ya na Jehova dị ná mma. Ọ bụrụ na ha na ya anọrọ n’oche, ọ ga-enyere ya aka ịna-ege ntị karịa mgbe naanị ya nọ.
Ọ́ bụrụkwanụ na nwatakịrị a chụrụ n’ọgbakọ na papa ya na mama ya ebighịzi? Ọ̀ pụtara na ha na ya agaghị anọ n’otu ebe ma a gaa ọmụmụ ihe? N’oge gara aga, Ụlọ Nche kwuru otú Onyeàmà Jehova kwesịrị isi na-emeso onye ikwu ya a chụrụ n’ọgbakọ ma ọ bụrụ na ya na onye ahụ ebighị. * Ma, ọ bụrụ na onye a chụrụ n’ọgbakọ anọrọ ebe ndị ezinụlọ ya nọ mgbe a bịara ọmụmụ ihe, ọ pụtaghị na ha na-achọ otú ha na ya ga-esi na-emekọ ihe. Anyị ekwesịghị ichegbuwe onwe anyị ma ọ bụrụ na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ bụ́ Ndịàmà Jehova na-emeso ya otú Baịbụl kwuru ka e si na-emeso ya ma ghara ịna-achọ otú ha na ya ga-esi na-akpa.—1 Kọr. 5:11, 13; 2 Jọn 11.
Ma onye a chụrụ n’ọgbakọ ọ̀ nọ n’akụkụ ndị ezinụlọ ya ma ọ̀ bụ n’akụkụ onye ọzọ ma a bịa ọmụmụ ihe, anyị ekwesịghị inyewe onwe anyị nsogbu ma ọ bụrụhaala na onye ahụ nọ nwayọọ. Ọ bụrụ na e nye iwu ebe a chọrọ ka onye a chụrụ n’ọgbakọ na-anọ, o nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu. Ọ bụrụ na ndị ezinụlọ onye ahụ a chụrụ n’ọgbakọ na ụmụnna ndị ọzọ na-agba mbọ na-emeso onye ahụ otú Baịbụl kwuru ka e si na-emeso ya, mmadụ ekwesịghị inyewe onwe ya nsogbu gbasara ebe ndị bịara ọmụmụ ihe ga-anọ. Mmadụ ekwesịghịkwa inye onwe ya nsogbu ma ọ bụrụ na ebe onye ahụ a chụrụ n’ọgbakọ nọ emeghị ka ụmụnna sụọ ngọngọ. *
^ para. 5 Gụọ Ụlọ Nche December 15, 1981, peeji nke 29 na 30.
^ para. 6 A ga-eji ihe e kwuru ebe a dochie ihe e kwuru n’Ụlọ Nche (Bekee) April 1, 1953, peeji nke 223.
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ—Ọgọst 2013